Hawsha noola diray | Kronofogden
Waxaan leennahay hawl cad nooloo diray. Waxaan caawineynaa cidda aan lacagteedi la siin, waxaanna taageero iyo talooyin siineynaa cidda lacagta iska bixineysa. Waxaan sidoo kale hubineynaa in lacagaha si sax ah loo dhiibo. Waa xukuumadda cidda sanad walba go’aamineysa sida aan hawsheenna u fulineyno iyo waxa aan mudnaanta siineyno.
Hawl xukuumadda ka socota
Xukuumaddu shaqo ayey noogu direysaa Qaraarrada ka soo baxa iyadoo ay la socdaan tilmaamooyin loogu tala galay hey’adda Kronofogden. Warqadda xukummadda waxaa ku qoran sida aan hawsha u qabaneyno iyo waxa aan mudnaanta siineyno inta sanadku uu socdo.
Hawlaha ay xukuumaddu noo dirtay waa in aan:
Gacan ka geysanno xaqiijinta maalgelin loo helo hey’adaha dowladda,
Gacan ka geysanno in la helo bulsho si fiican u shaqeyneysa marka la eego dadka shacabka ah iyo ganacsatada,
Ka hortagno dembiyada.
Hawsha waxaan la wadaagnaa Skatteverket iyo Tullverket.
Sideen waxaas u sameynaa?
Waxaan hawsheenna ku qabannaa annagoo hubineyna in la siiyo lacagteeda cidda xaqa u leh in la siiyo. Waxay ciddaasi noqon kartaa hey’ad dowladeed, degmo, shirkad ama qof shacab ah oo naga codsaday in aan ka caawinno in uu lacagtiisi helo.
Waxaan xitaa taageero siineynaa cidda deynka iska bixineysa, waxanna hubineynaa in lacag iska bixintu ay si sharci ahaan sax ah u dhacdo. Waxaan taas sameyneynaa annagoo tusaale ahaan u shaqeyneyno si ka hortag ah, bixineyno deyn dhaafid iyo annagoo gacan ka geysaneyna in haddii uu jiro murun aan lacag bixin la xiriirin, ee tusaale ahaan la xiriira guri qof ka saarid.
Abidkeen cid aan dhinacyada la jireyno ama ka jireyno ma jirto.
Maxaa dheeraad ah oo aan sameyneynaa?
Laakin waxaan sameynaa wax aad uga badan intaas. Waa kuwan tusaalooyin ku aaddan qaar ka mid hawlaha kale ee shaqo ee aan qabanno:
Qokti uu deyn la dego waxay naga codsan kartaa deyn dhaafid. Waxaan siineynaa taageero si ay qofta ay deyntu la degtay nolosha ugu soo laabato iyadoon deyn ku jirin.
Waxaan iskaashi la leennahay hey’ado dowladeed oo kala duduwan, shirkado iyo ururro si aan u yareyno tirada deynku aad ula degay ee bulshada ka midka ah, waxaa taas loola jeedaa in aan yareyn kooxda in badan ama in yarba ha noqotee dhibaatada joogtada ah ku qaba in ay deymankooda bixiyaan.
Waxaan koontarooleynaa sida ay wax u maareynayaan kuwa gacanta ku haya maareynta kicidda.
Waxaan ka shaqeynaynaa in aan kor u qaadno aqoonta ku aaddan dhaqaalaha shakhsiga ah ee gaar ahaan dhallinyarada iyo dadka waaweyn.
Waxaan ku lug lahaannaa marka qof iska dhiibi waaya kirada laga saarayo guriga.
Waxaan nahay hey’ad khabiirad ku ah oo aqoon aad u weyn u leh saameynta ay leedahay in qofka uu deyn la dego, haddey noqon lahayd bulshada iyo haddey noqon lahayd qofka shakhsiga ah intaba. Waxaan taageereyna, maalgelineynaane cilmi baaris gudeheenna ah iyo mid cilmi baarayaal kale ay wadaan si aan aqoonteena kor ugu qaadno.
Soomaali (somaliska) »
Nagu saabsan »